Kuverengera Kudzvanya | ThatsLuck.com
Iyo Clicker kwenguva refu yemitambo mitambo
Kuverengera Clicker iri roulette software nyowani iyo inokutendera iwe kuti utarisane zviri nani nemitambo chaiyo yemarathoni kana zano rako richisanganisira kubhejera nhamba dzakafanana kana mikana yakafanana kune akawanda kana mazhinji ma spins.
Panorama ye clicker yeiyo roulette kutaura zvazviri, chishandiso chakafanana chakashaikwa; kana zvirizvo iwe watove nemukana wekushandisa zvimwe zvishandiso senge ► Roulette Turbo Clicker, kana ichangoburwa ► Dzvanya Kutenderera, iwe zvechokwadi wakakoshesa kubatsira kwemutambi werudzi urwu software.
Nei Kuverengera Clicker
Munguva pfupi yapfuura, ndanga ndichiedza zvakanyanya uye kakawanda kuyedza mamwe masisitimu pamikana yakapusa kana panhamba imwe chete, kwandinogara ndichifanira kubheja zvakafanana kune akasiyana ma spins.
Muenzaniso? Kana ini ndiri kuongorora roulette ne ► Roulette Bias Sniper uye ndinoziva kuti inguva yekubheja nekuti pane manhamba manomwe muhuwandu, asi ini handisati ndagadzira iyo bot yatoverengerwa musoftware nekuti ini ndaishandisa iyo software yekutarisa ► Lobby Miner, ndatenda Kuverengera Clicker Ini ndichave ndinokwanisa kutanga kubheja mumasekondi mashoma, pasina njodzi yekushaya imwe chete yepfuti yechikamu chakanakisa chandinoda kuedza kushandisa.
Gadzira Countdown Clicker
Zvinotora zvishoma, pakuita iwe unofanirwa kuisa iyo X / Y nongedzo pachiratidziro munzvimbo dzakasiyana 2 poindi chete: yekutanga iri pachena bhatani rekudzokorora kubheja, yechipiri ndiyo poindi yechiso chatinosarudza se Trigger Point.
Il Trigger Point mukudzidzira iyo poindi pane iyo skrini yaunofunga uye izvo chinja ruvara chete kana kubhejera kwavhurwa.
Pane ino puratifomu (iyo imwecheteyo painogara ► Lobby Miner), nekeji yega yega yekubheja kuverenga pasi mumasekondi kunooneka, uko manhamba ari makuru uye machena muvara.
Sezvinoratidzwa nemuseve mutsvuku, ini ndinogara ndichisarudza poindi iri pakati penhamba 1 yeiyo timer.
Kupinda maoordoreti emapoinzi maviri uye iyo kodhi yemavara yeTrigger Point, ini ndinongofanirwa kugonesa sarudzo Turbo Config, ndiise shoma pane bhatani rinosimbisa kubheja e nzvimbo yekudhinda pane keyboard, poi nekukurumidza mushure meiyo nhamba 1 yeiyo episode timer (pamwe panguva yakatarwa neColor Code mune iyo Pixel Info bar è ClWhite semufananidzo) uye tinya zvekare nzvimbo pane keyboard.
Zviripachena kana iwe ukatamba pane imwe chikuva, iwe uchafanirwa kutsvaga imwe yakasarudzika Trigger Point, asi ini ndinovimba kuti zvirinani kuti pfungwa iri pachena.
Ndizvozvo zvese, marongero emapoinzi maviri anozo nyorwa otomatiki muchirongwa!
Ngatidzokororei: Ini ndinotarisa iyo Turbo Config sarudzo, isa mbeva pane bhatani rinosimbisa kubheja uye kudzvanya nzvimbo, wozomirira kuverengera nhamba 1 kuti ioneke pachiratidziro, ita shuwa kuti kodhi yemavara yakachena (clwhite) uye dzvanya zvakare nzvimbo. Ndizvo.
Pakupedzisira, ini ndichatsanangura mashandiro emabhokisi maviri aya Trigger (kumusoro kuruboshwe) e Delay: yekutanga pakaunda inoitwa nekukurumidza kana iyo Trigger Point ikaonekwa pavhidhiyo (saka iwe uchaona kunyangwe iyo Trigger Point yakagadzirirwa nenzira kwayo), yechipiri ndiyo nhamba yemasekonzi kumirira isati yavavarira kubvira paTrigger Point rinoratidzika.
Kana iwe ukaisa iyo kukosha 2 mumunda Delay zvinoreva kuti kubheja kuchaiswa gare gare 2 masekondi kubva pakavhurika poindi pachiratidziri.
Kune chero kusahadzika, hongu, tarisa vhidhiyo pa ►YouTube.
Saka kana ndikafunga kuti ini ndinofanira kugara ndichiita kubheja kumwechete kwemakumi mashanu ekupota, ingoisa iyo kukosha makumi mashanu mumunda Autobet # uye tinya iyo Bhatani rebhatani, izvo zviri pachena zvichapfuura ON.
Panguva ino saizi yechirongwa yakadzikiswa, kutora nzvimbo diki sezvinobvira pane desktop yemitambo uye kana kumisikidzwa kwaitwa nemazvo, padanho rega rekubheja Kuverengera Clicker achabaya pane bhatani rinodzokorora chikamu chakapfuura (zviri pachena kuti iwe wakatozvinzwisisa kuti chikamu chekutanga chinofanira kuitwa nemaoko).
Mushure mekubheja kwega kwega, kaunda inoramba ichiderera kudzamara yasvika zero.
Muchikamu chezasi chechirongwa iwe unogona pakupedzisira kugadzirisa dzimwe mbiri dzekuwedzera, neiyo yekufunga izvo zvinofanirwa kuitika kana kuverenga kuverenga kwasvika zero.
Yokutanga ndiyo sarudzo Shutdown, iyo iri pachena inodzima PC, yechipiri ndiyo Sarudzo Ridza Ruzha Alarm, iyo inotamba mune chiuno ruzha iwe rwaunogona kusarudza kubva pakati pe 8 aripo.
Ndizvozvo, zvirokwazvo, ThatsLuck! Nakidzwa uye usakanganwa kunyorera kuTeregiramu chiteshi kana iwe uchida kuongorora dzese nhau kana kugamuchira imwe yakasarudzika bhonasi yakachengeterwa nhengo.
File Download	CDClicker.zip - 2 MB